सुदूरपश्चिममा फार्मद्वारा बाख्रा वितरण | गृहपृष्ठ
Home समाचार सुदूरपश्चिममा फार्मद्वारा बाख्रा वितरण
सुदूरपश्चिममा फार्मद्वारा बाख्रा वितरण
चैत ८, काठमाडौं (अस)। कैलाली जिल्लाको बूढीतोलामा अवस्थित बाख्रा विकास फार्मले सुदूरपश्चिमका किसानहरूलाई स्थानीय ‘खरी’ जातका बाख्रा विक्रीवितरण गरेको छ । किसानको मागबमोजिम खरी जातका बाख्रा विक्रीवितरण गरिएको फार्मका प्रमुख डा. प्रेमकुमार मण्डलले बताए । यो फार्म बाख्रा स्रोत केन्द्रका रूपमा २०४१ सालमा स्थापित भएको हो । अहिले फार्ममा २ सय ४० बाख्रा र सानाठूला गरी २८ बोका रहेका छन् । १२ हेक्टर जमीनमा फैलिएको यो फार्मबाट घाँसका बीउ र बिरुवासमेत उत्पादन गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइँदै आएको मण्डलले बताए ।
सुदूरपश्चिमका किसानलाई वार्षिक ५ हजार घाँसका बिरुवा र १५ क्विण्टल जै घाँसको बीउसमेत वितरण हुँदै आएको मण्डलले जानकारी दिए । सरकारले फार्म सञ्चालनका निम्ति वर्षेनि करीब रू. ३५ लाख रकम छुट्टयाउँदै आएको छ । तर, यसको आम्दानी भने वार्षिक साढे ३/४ लाखसम्म हुने गरेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिमकै निम्ति बाख्रा स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको यो फार्मबाट हरेक वर्ष नौओटै जिल्लाका किसानले बाख्राबोका लैजाने गरेका छन् । फार्मबाट प्रजननका निम्ति मात्र बाख्रा पाउने भएकाले किसानकहाँ पुगेका बाख्राबाट पनि फार्मको विकास भइरहेको मण्डलले बताए । फार्मकै सक्रियतामा कैलालीमा बाख्रापालन किसानहरूको आठओटा समूह बनाइएको छ । ती समूहमा अहिलेसम्म ८ हजार बाख्रा पुगिसकेको फार्मको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । फार्मले आठओटै समूहका बाख्रालाई वर्षको दुईपटक औषधि र एकपटक पीपीआर खोप लगाइदिने गरेको छ । समूहका बाख्रालाई खुवाउने औषधि र खोप फार्मले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । औषधि र खोपबाहेक बाख्रापालक हरेक किसानलाई वर्षको १० ओटा एकदिने बाख्रापालन तालीमसमेत दिँदै आएको मण्डलले बताए ।
मध्यपहाडी क्षेत्रका निम्ति खरी जातको बाख्रा अत्यन्तै उपयुक्त मानिन्छ । बाख्रापालनलाई बृहत् रूप दिन सक्ने हो भने सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका किसानको आर्थिक उन्नति हुन सक्ने मण्डलको अनुभव छ । खरी जातलाई अझ परिष्कृत र शुद्ध बनाउनका निम्ति यूएसआईडीले समेत सहयोग गर्ने भएको उनले जानकारी दिए । फार्मबाट प्रजननयोग्य बाख्री प्रतिकिलो रू. १ सय ७५, प्रजननयोग्य बोका प्रतिकिलो रू. २ सय ५० र प्रजनन अयोग्य बोका रू. २ सय र बाख्री १ सय ५० मा विक्री हुँदै आएको मण्डलले बताए । सुदूरपश्चिमको ग्रामीण महिला रोजगारीका निम्ति यो बाख्रा फार्मले ठूलो सहयोग पुर्‍याएको उनको अनुभव छ । बाख्रापालनका निम्ति सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा प्रजननयोग्य बाख्रीको उत्पादन र वितरण गर्न सकेमा बाख्रापालन सुदूरपश्चिमको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने मण्डलको अनुभव छ ।
८ सय ४० कृषकलाई च्याउको बीउ वितरण
चैत ८, तनहुँ (अस) । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तनहुँले जिल्लाका ८ सय ४० कृषकलाई च्याउको बीउ वितरण गरेको छ । जिल्लाभर रहेका १५ ओटा कृषि सम्पर्कस्थल तथा सेवाकेन्द्रमार्फत ती बीउ वितरण गरिएको कार्यालयका प्राविधिक सहायक चन्द्रबहादुर भण्डारीले बताए । प्रत्येक कृषकलाई एक/एक प्याकेटको दरले बीउ उपलब्ध गराइएको छ । यसैगरी सो कार्यालयले विभिन्न १० कृषि सर्म्पर्कस्थलमा च्याउ उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ । च्याउखेतीका लागि कार्यालयले ६० जना कृषकलाई मिनिकीटसमेत नि:शुल्क वितरण गरेको जानकारी दिएको छ । मिनिकीटमा च्याउको बीउलगायत खेतीका लागि आवश्यक सामग्री रहेको पनि भण्डारीले बताए ।
किसानलाई ३ हजार चल्ला वितरण
चैत ८, सुर्खेत (अस) । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, सुर्खेतले किसानलाई लेयर्स कुखुराका ३ हजार चल्ला विक्रीवितरण गरेको छ । किसानको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले बाँकेको खजुरास्थित सरकारी फार्मबाट ती चल्ला ल्याएर विक्रीवितरण गरिएको सो कार्यालयले बताएको छ । ती चल्ला जिल्लाका गर्पन, गुमी, मालारानी, गुटु, तातोपानी, बिजौरा र विद्यापुर गाविस तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालगायतमा २/२ सयका दरले विक्रीवितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख डा. किशनलाल भट्टले बताए । एक जना किसानलाई ६० रुपैयाँ प्रतिगोटाको दरले १ सयओटासम्म चल्ला विक्री गर्ने गरिएको छ । कार्यालयले ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ ।
पहिलेको कोदोबारी अहिले सुन्तलाबारी
चैत ८, पर्वत (अस)। परम्परागत कोदो र मकैखेती गर्दै आएका पर्वतको कुर्घा गाविसका कृषकले व्यावसायिक रूपमा सुन्तलाखेती शुरू गरेपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन थालेको छ । कोदो र मकैखेतीबाट जीवनस्तर उकास्न नसकेका त्यहाँका किसानले त्यसपछि सुन्तलाखेती शुरू गरेका थिए । सुन्तलाखेतीपछि थोरै परिश्रमबाट पनि अत्यधिक आम्दानी लिन थालेको कृषकहरूले नै बताएका छन् । अहिले सो गाविसका कृषक परम्परागत अन्नबाली छाडेर सुन्तलाखेती गर्न लागेका छन् । अन्नबालीबाट सबै समस्या हल हुन छाडेपछि आम्दानीको हिसाबले सुन्तलाखेती गर्न थालेको कृषक अमरबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘अन्नबाली लगाए पनि राम्रै हुन्थ्यो, उनले भने, ‘तर सुन्तलाखेतीबाट नगद लिन सकिने भएकाले यो खेती गरेका हौं ।’ मल्लले १० वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन् । गाविसका सुन्तला कृषकले सुन्तला विक्रीबाट वार्षिक रू. १० लाखदेखि रू. १५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको अभियानलाई बताए ।
उपयुक्त माटो र हावापानीका कारण सो गाविस सुन्तलाखेतीका लागि उपयुक्त छ । अहिले सो गाविसको वडा नं १ देखि ९ सम्मका अधिकांश किसान व्यावसायिक सुन्तलाखेतीमै संलग्न छन् । गाउँमा उत्पादन भएको सुन्तला विक्री गर्नसमेत कुनै समस्या नभएपछि कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । सो गाविसमा उत्पादित सुन्तला जिल्लाका विभिन्न बजारका अतिरिक्त पोखरा, बागलुङ, काठमाडौं, नारायणगढलगायतका शहरहरूमा विक्री हुने गरेको छ । गाविसका प्रत्येक घरमा अहिले १ सयदेखि ७ सयसम्म सुन्तलाका बोट छन् । सुन्तला राख्नका लागि गाउँमै चिस्यान केन्द्र पनि स्थापना भइसकेकाले सुन्तला उचित मूल्यमा बेच्न सजिलो भएको कृषकहरू बताउँछन् । सुन्तलाको खपत कम हुने समयमा कृषकहरूले सुन्तलाको जुस पनि उत्पादन गर्नेे गरेका छन् । हावापानीका दृष्टिले कुर्घा गाविस राम्रो भएकाले अन्नबाली उत्पादन पनि राम्रो हुने गरेको कृषकहरूको भनाइ छ ।
दाङमा ३ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन
चैत ८, घोराही (दाङ) । दाङ जिल्लामा वार्षिक ३ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लास्थित ताल, पोखरी र रिजर्भभ्वायरसमेतका ५ सय १५ जलाशयमा माछा उत्पादन गरिन्छ । जिल्लामा कुल १ सय ११ हेक्टर जग्गामा प्रतिहेक्टर २ दशमलव ७२ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दाङका प्रसार अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्यले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका २७ हेक्टर जग्गामा व्यावसायिक सघन माछापालन, ४० हेक्टरमा उन्नत माछापालन र २५ हेक्टरमा सामान्य माछापालन गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त जिल्लाका १९ हेक्टर तालतलैयामा पनि माछापालन गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।
जिल्लामा माछापालन गर्न विभिन्न सहकारी संस्थाहरू सक्रिय रहेका पनि सो कार्यालयले बताएको छ । माछापालन गर्ने यस्ता संस्थाहरूमा सुनगाभा मत्स्यपालक सहकारी संस्था-डुरुवा र गौतम मत्स्य फूलबारी-सोनपुरसहित विभिन्न मत्स्यकृषक समूह रहेका छन् । यस्ता समूहहरूमा सिसहनियाँ, ढिकपुर, पञ्चकुले, गढवा, लालमटिया, चरिङ्गेदह, गौरीताल, बाह्रकुनेदह, परस्पुर कृषक समूहलगायत १५ समूह छन् । एउटा कृषक समूहमा ३ सय ५५ किसान आबद्ध रहेको पनि सो कार्यालयले बताएको छ । दाङमा विशेष गरेर सिल्भर कार्प, ग्रास कार्प, बिगहेड कार्प, रहू, नैनी र भाकुर जातका माछा पाल्ने गरिएको छ । जिल्लामा भैरहवा र नेपालगञ्जबाट माछाका भुरा ल्याइने गरिएको र त्यसका लागि कार्यालयले ढुवानीमा अनुदान दिने गरेको पनि अधिकृत आचार्यले अभियानलाई बताए ।
गङ्गापरस्पुर गाविस-५ परस्पुरमा गरिएको माछापालन जिल्लामै उत्कृष्ट रहेको छ । कृषि विकास कार्यालय, दाङका प्राविधिक सहायक मुकुन्दराज देवकोटाका अनुसार १० बिगहा जग्गामा बनाइएको पोखरीमा गरिएको सामूहिक माछापालनबाट एक मौसममा रू. ५ लाखसम्मको माछा विक्री हुने गरेको छ । सो ठाउँका २२ घरपरिवारको जग्गामा पोखरी बनाइएको छ । पोखरी निर्माणका लागि प्रयोग भएको जग्गाको अनुपातमा (प्रति कट्ठाका हिसाबले) माछा विक्रीबाट भएको आम्दानी कृषकले दामाशाहीले बाँड्ने गरेको पनि देवकोटाले बताए ।
उत्पादनका दृष्टिले ठीकै भए पनि सो उत्पादन जिल्लाका लागि अपुग रहेको पनि सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत ५ किलोका दरले जिल्लाका बासिन्दालाई २३ हजार मेट्रिक टन माछा आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेको उत्पादन जिल्लाको आवश्यकताको १ दशमलव ३ प्रतिशतमात्र हो । कार्यालयले जलवायुको हिसाबले दाङ माछा उत्पादनका लागि राम्रो भए पनि व्यावसायिक रूपले उत्पादन भने हुन सकेको छैन । पानीको स्रोत नभएका कारण पनि माछा उत्पादन कम हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । माछा कम उत्पादन हुने गरेकाले दाङ जिल्ला माछाका लागि बाँके तथा बर्दिया जिल्लामा निर्भर छ । स्थानीय उत्पादन जिल्लाका लागि अपुग हुने भएकाले बाहिरबाट ल्याउँदा ढुवानीका कारण माछाको मूल्य महँगो पर्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।
चैत ८, सुर्खेत (अस)। सुर्खेत जिल्लाका ६ गाविसमा खाद्यान्न सङ्कटको स्थिति देखिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार खाद्यान्न सङ्कटको स्थिति देखिएका गाविसहरूमा लगाम, बेतान, घाटगाउँ, छाप्रे, पोखरीकाँडा र तरङ्गा रहेका छन् । सो कार्यालयले आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुने भएकाले ती गाविसमा खाद्यान्न सङ्कटको स्थिति देखिएको बताएको छ । जिल्लाकै उत्पादनका हिसाबले भने सुर्खेत जिल्ला आत्मनिर्भर रहेको पनि कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले ती गाविसमा खाद्यान्नको उत्पादन आवश्यकताअनुसार हुन नसकेको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि अधिकृत कमलराज गैरेले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा अहिले १ हजार ६ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुन्छ, तर खेतीयोग्य जमीन र पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा ६ गाविसले भने प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न सङ्कट भोग्नु परेको छ ।’
मध्यपश्चिम क्षेत्रका ४४ र सुदू्रपश्चिम क्षेत्रका ४५ प्रतिशत जनता अहिले भोकमरीको चपेटामा रहेको देखिएको छ । भौतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले पछि परेको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा यस वर्ष खाद्यान्नको उत्पादन घट्ने स्थिति देखिएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले बताएको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रमा यस वर्ष ३ लाख ४१ हजार ८ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न कम उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रले हरेक वर्ष खाद्यान्नको सङ्कट भोग्दै आएको छ । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, सुर्खेतले समयमा पानी नपरेका कारण स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने गरेका धान, मकै, गहुँ, कोदो र जौजस्ता खाद्यबालीको उत्पादन कम हुने स्पष्ट पारेको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार यस वर्ष मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामा ८ लाख ८७ हजार ३ सय ८३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुनेछ । यस क्षेत्रको वार्षिक खाद्यान्न आवश्यकता भने १२ लाख २९ हजार २ सय ४२ मेट्रिक टन रहेको छ । विशेषगरी कालिकोट, डोल्पा, मुगु, प्युठान, रोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र जाजरकोट जिल्लामा खाद्यान्नको उत्पादन कमी आउने निर्देशनालयको अनुमान छ । उत्पादनमा कमी हुनाका कारण यस वर्षपनि मध्यपश्चिम क्षेत्रले खाद्य सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । निर्देशनालयले मध्यपश्चिमको कालीकोट जिल्लामा सबैभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ । सो जिल्लामा यस वर्ष९ हजार ३ सय ९४ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने पनि निर्देशनालयले अनुमान गरेको छ । जिल्लाको आवश्यकता भने वार्षिक २३ हजार ३ सय ८७ मेट्रिक टन रहेको छ । कालिकोटमा यस वर्ष१४ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने स्थिति देखिएको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रका पहाडी १० जिल्लामा खेतीयोग्य जमीनको १० प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । निर्देशनालयले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा एकातिर गरीबी र अशिक्षा तथा अर्कोतिर खेतीयोग्य जमीनको सदुपयोग हुन नसक्दा उत्पादन घट्ने गरेको जानकारी दिएको छ ।